Vokatra mpamokatra, mpamatsy - Fividianana entana any Chine
Boaty fivarotana kapoakan-tsakafo CPLA miaraka amina boaty famafazana fampisehoana
Boaty boaty manokana Nopetahana CPLA fonosana CPLA manokana misy boaty fisehoana ranomaso. Namboarina avy amin'ireo loharanom-pahalazana azo havaozina sy azo antoka. Mandray tsara ny tsenan'ny eropeana sy ny amerikana izy ireo.
CPLA Kit-namboarina azo avy amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo taratasy
Ity seta vita amin'ny cutlery ity dia misy antsy CPLA, fork, sotro ary napkin. Ho an'ny filanao fanaka, ilay fonosana dia feno fonosana kitapo vita amin'ny kraft. Mety amin'ny fampiasana amin'ny lovia mafana, izay mahatonga azy ireo tsara ho an'ny tanjona fialana. Tena tsara ampiasaina amin'ny hetsika na fivoriambe ivelany!
CPLA Kitapom-bidy vita amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo azo antoka
Ity seta vita amin'ny cutlery ity dia misy antsy CPLA, fork, sotro ary napkin. Ho an'ny serasera, ny fonosana dia feno ao anaty kitapo foilika compostable. Mety amin'ny fampiasana amin'ny lovia mafana, izay mahatonga azy ireo tsara ho an'ny tanjona fialana. Tena tsara ampiasaina amin'ny hetsika na fivoriambe ivelany!
CPLA + Bamboly akorandriaka mifototra amin'ny plastika tsy misy kitapom-batsy azo refesina 7 santimetatra